25 Astaamo ku saleysan qaab-qoraal | Abuurista khadka tooska ah
25 Calaamadaha ku saleysan qaab qorista
Waa inaan qiraa haddii aan ku qasbanahay inaan naftayda is-taago inaan wax badan ka qabanyo astaamaha marka loo eego ha ku qorin qorista, laakiin dhib uma lihi in aan qirto in ay jiraan astaamo qoraal ku saleysan qaab-qoraaleedyo kuwaas oo ah kuwo cajiib ah oo loo bogaadiyo.
Haddii aad haysatid wakhti firaaqo ah oo aad ku tababbarto, waxaad isku dayi kartaa inaad sameyso a astaan ​​leh xarfo, oo sidan ayaad ku arki doontaa kakanaanta naqshadeynta noocan ah, maaddaama ay tahay inaan ku gudbinno waxyaabo badan oo dhawr xaraf oo keliya ah oo aan caawimaad ka helin walxaha dibedda ah.
Boodka ka dib waxaan kuu daynayaa isku soo ururinta cajiibka ah. Waxaan aad ugula talinayaa.
Waqtigan xaadirka ah
David Michael Original
Dib uga dhicin
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » logos » 25 Calaamadaha ku saleysan qaab qorista
Xayeysiinta hodanka ah dijo
uruurinta weyn. Aad u dhiirrigelin, mahadsanid
12 Burush Caleenta Caleenta Dabiiciga ah